Zimbambwe: China to build $1.1bn thermal power plant – Medafrica Times
July 24, 2015 Khalid Al Mouahidi Finance, Zoom 0
Zimbambwe signed on Thursday a $1.1 billion agreement with the China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) to build a 600-megawatt thermal power plant by 2019 in the country.
At a news conference in the capital Harare, Stuart Perry, the chairman of the Pan-African Energy Resource, PER Lusulu Power, said: “This first phase is a 600 MW coal fired plant, it’s the first of four phases so it’s a huge project for Zimbabwe. One of the biggest projects Zimbabwe has ever done”.
According to him, the construction should begin early next year with the first phase completed in 2019.
“It is our honor to help solve the power problem in Zimbabwe,” Huang Changbiao, the general manager for CSCEC eastern and southern Africa said.
“It is a very important project which seeks to address the infrastructure gap in the power generation sector,” Zimbabwe’s Finance Minister Patrick Chinamasa.
Zimbabwe’s national power company plans to build new power stations to produce 3,500 MW at a cost of budgeted $5 billion to scale up electricity generation, as the country battles a crippling deficit.